ဒီနေ့ထိ စိုင်းစိုင်းအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ စမိုင်းလ်
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ပြုထားပါသေးတယ်။
သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်က သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ပြုရင်း မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက် ဒီနေ့ထိ ဘာလို့ အောင်မြင်နေလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုလည်း ပြောပြထားပါသေးတယ်။
စမိုင်းလ်က ဒီနေ့(ဧပြီ၁၀ရက်)မှာ ကျရောက်တဲ့ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ဆုတောင်းစကားဆိုရင်း စိုင်းစိုင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သူမနဲ့ စိုင်းစိုင်းတို့ အနုပညာအလုပ်တွေ အတူတူလုပ်စဉ်ကတည်းက စိုင်းစိုင်းဟာ အလုပ်တိုင်းကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြိုးစားလုပ်ခဲ့သူတစ်ယောက်လို့ စမိုင်းလ်က ဆိုပါတယ်။
“စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဆိုတာ ဦးပီတာနဲ့အတူတူ ကျမတို့ စပြီးအနုပညာလုပ်ကြတယ်. VCD တွေခေတ်က မနားတမ်း သူနဲ့အတူတူ ရိုက်ခဲ့ကြတယ်.. Strand hotel မှာ သူ့သီချင်းစဆိုတော့ လူတွေရဲ့အအော်ခံပြီး သီချင်းကိုပြီးအောင်ဆိုသွားခဲ့တယ်.. သူ့သီချင်းခွေထွက်တော့လည်း ကိုယ်တွေနဲ့ဖူဆန်မှာကြော်ငြာရိုက်ကြ.. သူနဲ့စခင်ကတည်းက သူူရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်က အလုပ်တိုင်းကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့လုပ်တယ် ကြိုးစားတယ်..နောက်ပိုင်း ကျမ သရုပ်ဆောင်ပိုလုပ်ဖြစ်တော့ သူနဲ့သိပ်မရိုကိဖြစ်တော့ဘူး” လို့ သူမကဆိုပါတယ်။
Rapper တွေများတဲ့ခေတ်မှာ စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက် ဘာလို့ အောင်မြင်နေတာလဲဆိုတာ တွေးပြီး ထူးဆန်းနေခဲ့တယ်တဲ့။ အခုတော့လည်း စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက် ဘာလို့ အခုချိန်ထိ အောင်မြင်နေတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ယခုလို ပြောပြထားပါသေးတယ်။
“အခုအချိန်ထိ သူဘာလို့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ မထူးဆန်းတော့ဘူး...သူဘာလို့အောင်မြင်နေလဲဆိုတော့ သူပရိတ်သတ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်.. ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝေဖန်တာကိုလက်ခံနိုင်တယ်.. အဓိကက သူဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်. ခေတ်ကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာတယ်.. သူ့ market ကို သူသိတယ်. . Business mind ရှိတယ်... အောင်မြင်မှုပေါ်မှာ ရစ်မူးပြီးမနေဘူူး မနားမနေ ကြိုးစားတယ်။ အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးသေးပါဘူး” လို့ စမိုင်းလ်က ပြောပါတယ်။
စမိုင်းလ်က စိုင်းစိုင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြရင်း စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက် နောက်အနှစ်လေးဆယ်ထိ ပွဲတွေ လုပ်နိုင်ပါစေဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေး ပြောထားပါသေးတယ်။
Photo : htoo kyaw htet